Giriiga Oo Hub Soo Iibsanaya Iyo Xiisadda Kala Dhexeeysa Turkiga Oo Cirka Isku Shareertay – Borama News Network
Giriiga Oo Hub Soo Iibsanaya Iyo Xiisadda Kala Dhexeeysa Turkiga Oo Cirka Isku Shareertay
Xukumadda Giriiga ayaa ku dhawaaqday in ay hub dheeraad ah soo iibsanayso xilli xiisadda kala dhaxeeysa Turkiga ay cirka isku sii shareerayso.
Hubka ay soo iibsanayaan waxaa ka mid ah 18 ah diyaaradaha dagaalka Faransiisku uu sameeyo ee nooca yaqaano Rafale.
Rai’sul wasaaraha Giriiga Kyriakos Mitsotakis ayaa sheegay in sidoo kale ay soo iibsanayaan 4 Markab oo kuwa dagalka iyo 4 diyaaradood oo ah nooca Helkoptarada ee ay adeegsadaan ciidamada badda.
Rai’sul wasaraha Giriiga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in ay kordhin doono tirada ciidamada dalkaasi.
“Waxaa la joogaa xilligii la xoojin lahaa cidamada qalabka sida,” waxaa sidaasi sheegay madaxwaynaha Giriiga Mr Mitsotakis.
Giriiga ayaa sidoo klae qorshaynaya in uu soo iibsado hubka lidka taagiyada iyo gantaalada difaaca cirka.
Xiisadda u dhaxeeysa Turkiga iyo Gariigga ayaa cirka isku sii shareereysay taasi oo ku saabsan Turkiga oo sahmin shidaal ka wada bariga badda Mediterranean-ka.
Xukuumadda Turkiga aya dhawaan Markab Shidaal iyo Gaas ka baara u dirtay goobo ay ku muransan yihiin Giriiga.
Labadan dal oo ka wada tirsan gaashaanbuurta Nato ayaa waxay labaduba sheeganayan lahaanshiyaha goobaha shidaalka laga baarayo taasi oo sababtay cabsi imika laga qabo in xiisadda ay sii kululaato.
Midowga Yurub oo ay Gariiga xubin ka yihiin ayaa horey ugu baaqay wadaxaajood.
Balse madaxwayanha Fransiiska ayaa dhawaan si kulul uga hadlay xiisadda labada dhinac isaga oo sheegay in waxa ay Turkiga wadaan aan la aqbali Karin.
Sida ay sheegtay wakaalada wararka ee AFP Giriiga ayaa gaashaandhiga ku bixinaya lacagtii ugu badnayd muddo 20 sano ah.
Dhanka kale xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in dalkiisa uu ka walaacsan yahay howlaha ay Turkiga ay shidaalka iyo Gaaska kaga baarayaan biyaha bariga Mediterranean-ka ee ay jasiiradda Qubrus sheegto in ay leedahay.
Mr Pompeo ayaa waxaa uu ka hadlayay caasimadda Qubrus, Nicosia, halkaasi oo uu wadahadalo kula yeeshay madaxwayne Nicos Anastasiades.
Labada dhinac ayaa waxay ka wadahadleen xiisadda gobolka ee u dhaxeeysa Turkiga, Giriga iyo jasiiradda Qubrus.
Maxaa soo cusboonaysiiyay xiisadda?
Turkiga iyo Giriiga ayaa ku loolamaya sidii ay u hormarin lahaayeen kheyraad dhanka tamarta ee bariga badda Mediterranean-ka.
Bishii July, Turkiga ayaa waxay bixiyeen digniin dhanka badda ah taasi oo loo yaqaano Navtex waxayna sheegeen in markabka Oruc Reis oo ah mid sahmiya shidaalka ay u dirayso meel u dhaw jasiiradda Kastellorizo, oo masaafo yar u jirta xeebta koonnfur galbeed ee dalka Turkiga.
Sanooyiinkii u dambeeyay ayaa waxaa keyd dhanka Gaaska ah laga helay biyaha Qubrus, taasi oo keentay in dowladdaha Qubrus, Giriiga, Masar, iyo Israa’iil ay ka wada shaqeeyaan sidii ay kheyraadkaasi inta badan ula soo bixi lahaayeen.
Sanadkii aanu soo dhaafnay Turkiga ayaa waxay dardargaliyeen inay shidaal ka baaraan galbeedka Qubrus oo kala qeybsanayd tan iyo 1974, islamarkana ay Turkiga gacanta ku hayaan wuqooyiga Qubrus oo ay Turkiga kali ah aqoonsan yihiin.
Turkiga ayaa mar walba ku dooda in jasiiradaa khayraadka ku jira la qeybsado.
Bishii November 2019, xukuumadda Ankara ayaa waxay heshiis la saxiixatay Liibiya taasi oo Turkiga ay sheegeen in lagu abuuray aag dhaqaale oo gaar ah oo u dhaxeeya xeebta koonfurta Turkiga ilaa waqooyi bari Liibiya.
Dowladda Masar ayaa tallaabadasi ku tilmaamtay mid sharci daro ah, halka xukuumadda Gariiga ay ku tilmaamtay mid aan caqligal ahayn maadaama aan la xusin jasiiradda Crete ee Giriiga ku taalla.
Dabayaaqadii bishii May, ayay Turkiga shaaciyeen inay qorshaynayaan in ay qodida Gaaska bilaabaan bilooyiinka soo socda taasi oo ay ka sameyn doonaan dhowr goobood, waxaana arrintan qaaylo dhaan ka muujiyay midowga Yurub, Giriiga iyo Qubrus.
Dhowr shati ayaa horey loo soo saaray taasi oo ah in shirkadaha shidaalalka Turkiga ay shidaal qodis ka bilaabi karaan bariga badda Medatareeniyanka, taasi oo ay ku jiraan jasiiradaha Gariiga ee Rhodes and Crete.
Kala Badh Mitariga Dalal Caalamka Oo Ku Guda Jira Dhoolatusyo Milatari Iyo Sobobta
Isbahaysiga Sucuudiga Oo Duqaymo La Eegtay Xarumaha Xuutiyiinta Ee Magaalada Sanca
Xiisada Dagaal Ee Liibiya Oo Cirka Isku Shareertay Iyo Xaftar Oo Dagaal Ku Dhawaaqay Iyo Dagaal Laga Cabsi Qabo
Bnnstaff Bnnstaff December 27, 2020
Wasiirka Arimaha Dibada Somaliya Oo Xadhiga Ka Jaray Dhismaha Safaarada Somaliya Ee Kenya
Bnnstaff Bnnstaff November 15, 2020
Banaanbax Lagaga Soo Horjeedo Aflagaada Faransiisku Kula Kacay Diinta Islaamka Iyo Nabi Maxamed
Bnnstaff Bnnstaff October 27, 2020